Mid ka mid ah xiddigaha bartilmaameedka u ah Kooxda Man United oo Guri uu dago ka baadi goobaya Ingiriiska… (Miyuu iibsan doonaa Guriga Sterling?) – Gool FM
Mid ka mid ah xiddigaha bartilmaameedka u ah Kooxda Man United oo Guri uu dago ka baadi goobaya Ingiriiska… (Miyuu iibsan doonaa Guriga Sterling?)
(Manchester) 18 Luulyo 2021. Mid ka mid ah xiddigaha Bartilmaameedka u ah Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inuu guri ka raadsanayo dalka Ingiriiska.
Bartilmaameedka Manchester United ee Kieran Trippier ayaa la soo sheegayaa in guri uu deggo uu ka baadi goobayo halka la yiraahdo Cheshire ee dhacda Waqooyi-galbeed England.
Wargeyska The Sun ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa warinaya in xiddiga bartilmaameedka u ah Manchester United ee Kieran Trippier la arka isagoo guri ka raadsanaya meel ku dhow garoonka Old Trafford.
Daafaca dambeedka midig ee Kooxda Atletico Madrid iyo Xulka qaranka England ayaa xiiseynaya inuu iibsado guriga Raheem Sterling ee Cheshire, iyadoo xiddigan Trippier la la xiriirinayo inuu ka mid noqdo Kooxda ay xafiiltamaan Man City.
Kooxda Barcelona oo qarka u saaran inay iska fasaxdo mid ka mid ah Daafacyadeeda... (Waa kee, ma Lenglet mise Umtiti?)